ကိတ် Middleton: ကိတ်ဝီလျံ၏အနှစ်သက်ဆုံး pastime ဘို့ချားလ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်မည်သို့ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ကိတ် Middleton: ကိတ်ဝီလျံ၏အနှစ်သက်ဆုံး pastime ဘို့ချားလ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်မည်သို့
ကိတ်, ကိန်းဘရစ်လက်ထပ်၏ Duchess မင်းသားဝီလျံ 2011 ဧပြီလပေမယ့်စုံတွဲတက္ကသိုလ်မှာသူတို့ရဲ့ရောက်ရှိစဉ်ကတည်းကအတူတူဖြစ်ပါတယ်။ စိန့် Andrews က။ အဆိုပါစုံတွဲသည်ကိတ်တော်ဝင်မိသားစုကိုသိရန်လာပြီအချိန်ကုန်ခဲ့ကွောငျး 2010 နှင့်ရှေ့တော်၌မိမိတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြေညာခဲ့သည်။ 2007 ခုနှစ်, Balmoral တစ်ခရီးစဉ်အတွင်း, ကိတ်မင်းသားချားလ်စ်နှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ ဝီလျံ၏အနှစ်သက်ဆုံး pastime ၏တဦးတည်းပါဝင်နေစဉ်။
အဆိုပါ Duchess two သေပြီထားသည်ကိုတွေ့တူအဘယ်အရာကိုကိုင်ထားပြသခဲ့သည်။
PETA (တိရစ္ဆာန်များ၏ Ethical ကုသမှုများအတွက်ပြည်သူ့) ၏တစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်အချိန်တွင် said: "ဒါဟာတုန်လှုပ်ဖွယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့၏အသွေးအားကစားအတွက်ပါဝင်နေသည်။ "
ဆက်ဖတ်ရန်: Meghan Markle နှင့်ဟယ်ရီလူမှုဆက်ဆံရေးတားမြစ်သည်။ တံဆိပ်၏ချိုးပတ်ပတ်လည်စက်ဝိုင်း
သတင်းကိတ် Middleton: ကိတ်တဲ့ဝါသနာအကြောင်းကိုမင်းသားချားလ်စ်နှင့်အတူဆက်စပ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
၏ Duchess ကင်းဘရစ် သူ၏ပထမဦးဆုံးအမဲလိုက်ခြင်းယူကြပြီမယ်လို့သူမကမင်းသားချားလ်စ်သမင်ကိုလိုက်ရှာဖို့သင်ယူလိမ့်မယ်။
The Daily Mail ကအဆိုအရ "မျက်မြင်သက်သေများသူ့ကိုကြိုးပြသခဲ့သည်အဖြစ်အလှမယ် Middleton မင်းသားချားလ်စ်နှင့်အတူတက်ကြွစွာ chatting ယုံကြည်မှုတစ်ခုထူးခြားတဲ့အဆင့်ကိုပြသတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "
ကိတ် Middleton သတင်း: တစ်ဦးကအမဲလိုက်ခြင်းဘုရင်မကြီးရဲ့စကော့တလန်နေထိုင်ရာ, Balmoral ရဲတိုက်၌ကျင်းပရာ (ရုပ်ပုံ: Getty)
ထိုအခါတော်ဝင်စာရေးဆရာရောဘတ် Jobson အဆိုပါ Highlands သို့ထဲတွင်တော်ဝင်ဆုတ်ခွာနေသက်သေပြခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
သူကရေးသားခဲ့သည်: "ကလူငယ်စုံတွဲ Balmoral ၏လယ်ပြင်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာ bolthole ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျေနပ်မှုအခါအဆိုပါအဖွားဝီလျံကသူ၏အနည်းငယ်သာသားအဘို့ကိတ်၏အရေးပါမှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပြသခဲ့သည်။ 19659004] မင်းသမီးဒိုင်ယာနာတော်ဝင်ဒိုမိန်းကိုမုန်းဖို့လူသိများခဲ့သည်နေစဉ်, မှူးမတ်ချားလ်စ်လှပတဲ့ရှုခင်းမေတ္တာရှင်ခဲ့ကြသည် - သူသူမထိုနညျးတူခံစားအကြောင်းအရာကိုမြင်လျှင်ကိတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်။
ကိတ်ဝီလျံသူ့ကိုအတွက်ချစ်တော်မူ Aberdeenshire ဝေးကွာသောရှုခင်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုဝေမျှနိုင်သူတစ်ဦးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်ဝေးသကဲ့သို့သူနှင့်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသူတစ်ဦးတှငျးမှမူသည်အတိုင်း, ကဆက်ပြောသည် ညဉ့်ကုန်မှာ crackling မီးရှေ့မှာဆန္ဒနှင့် pelotonnerait ။ နေ့ဖြစ်၏။ "
Read more: ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိတ် Middleton? ကိတ်သူမ၏မိသားစုကိုချဲ့ထွင်ကိုဘယ်လို
သတင်းကိတ် Middleton: ကိတ်နှင့်မင်းသားချားလ်စ် 2007 လိုက်ရှာဖို့စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြ (ရုပ်ပုံ: Getty)
တကယ်တော့ကိတ်သူမကပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 20 gauge ShotGun ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော်မူပြီအမဲလိုက်ခြင်းကြိုက်တယ်။
တစ်ဦးကပြောသည်: "သူမအမဲလိုက်, သေနတ်ပစ်, ငါးဖမ်း၏တိုင်းပြည်များ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ချစ်တော်မူ၏။ 20 caliber ၏ ShotGun ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းငှက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ "
အမဲလိုက်ဓာတ်ပုံများကို၏အနုတ်လက္ခဏာတုန့်ပြန်နေပေမယ့်ကိတ်ကနောက်ဆုံးလက်ဝှေ့နေ့အမဲလိုက်ခြင်းတက်ရောက်ခဲ့သည် - ပုံထားသည်ကိုတွေ့အမဲလိုက်, Partridge နှင့် duck, တော်ဝင်ဋီကာဆရာရေဗက္ကာအင်္ဂလိပ်အရသိရသည်။
ဒါဟာ Sandringham ၏လယ်ပြင်တွင်ရာအရပျကို ယူ. မစ္စစ်အင်္ဂလိပ်ကိတ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ "အမှတ်တံဆိပ်မိန်းမ" ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
Read more: ဘုရင်မကြီးလာရောက်လည်ပတ်ဘုရင်မကြီး Balmoral ၏ဧည့်သည်များအားလုံးရှိသူများ
ကိတ် Middleton သစ်ကို Meghan ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, ပြင်းပြင်းထန်ထန်သွေး SP orts ဆန့်ကျင် (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဒါပေမယ့်ကိတ်မင်းသားဟယ်ရီ၏ဇနီးအသစ်များ၏ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပွဲတော်အတွက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး Meghan Markle .
တစ်ဦးကတော်ဝင်အတွင်းကဆိုသည်: "Meghan တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ပြုသဘောပေါက်သူတို့အလေ့အထကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆွီဒင်တရားရုံးအားဖြင့်ချေမှုန်းရေး၏ပြစ်မှုထင်ရှားအဆိုပါရက်ပ်တစ်ဦးက $ AP Rocky - လူတွေ
ကောလာဟလ: Sanchez မန်ယူဖို့ Llorente အစားထိုးရန်, အင်တာမီလန်ထွက်ခွာ?
DRC: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 21 သြဂုတ်လကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက